လမ်းပျောက်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » လမ်းပျောက်သူ	8
Posted by အတွေးလေး on Dec 27, 2014 in Poetry | 8 comments
အလှမ်းကျယ်ရင် အလယ်လပ်သတဲ့ . . .
တပ်မက်မှုတွေ က ခြောက်ခမ်းလာတယ်
စိတ်ကူးတွေနဲ့ အသိဥာဏ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ဝေးသွားသလိုပဲ
ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့လမ်း ဟာ မှန်လားမှားလား မသိသေး
ဘ၀လှေကိုလှော်နေချိန် တက်ကျိုးရင် လက်နဲ့လှော်လိုက်မယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကဗျာက တစ်မျိုးပဲ၊ ဆန်းတယ်။
manawphyulay says: အင်း… ဘယ်လိုပြောရမလဲ…
လမ်းလျှောက်နေသူတစ်ဦးမှာ ခလုတ်ကန်သင်းကတော့ အမြဲတွေ့နေရဦးမှာပါပဲ….
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: လမ်းနဲ့..ခြေထောက်..
ခင်ဇော် says: ခြေထောက်ရှိသရွေ့ လျှောက်ရမှာ။
လမ်းရှိသရွေ့ ခလုတ်ဆိုတာ ရှိဦးမှာပဲ။
အသိနဲ့ ရှောင်ကွင်းပြီး ဘေးကင်းအောင် လျှောက်နိုင်ပါစေ။
kyeemite says: .လျှောက်အုံးဟေ့ ♫♪♫
uncle gyi says: ဒါဆိုပေတရာပေါ်မှာလျှောက်
min kyansix says: ဒီအတိုင်းရပ်နေရင်တော့ ခလုပ်မတိုက်လောက်တော့ဘူး
အတွေးလေး says: အားပေး သွားကြတဲ့ ဦးဦး ကိုကိုများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ရွာထဲသိပ်မရောက်ဖြစ်လို့ အခုမှ ၀င်မန့်ရတာပါ။